Gabdhaha Iskuulka ee Notre Dame waxay ku lahaayeen bilowgooda Jarmalka horaantii 1800s iyadoo uu hogaaminayo Caroline Gerhardinger, oo markii dambe loo yaqaanay Hooyo Theresa ee Ciise. Sanadkii 1843 ayey hooyo Theresa keentay afar gabdhood oo walaalo ah Mareykanka si ay wax u baraan caruurta muhaajiriinta Jarmalka ah.
Bishii Sebtember 1865 Hooyo Caroline Freiss ayaa ka jawaabtay codsigii qoysaska Katooliga ee Mankato ee Walaalaha. Saddex Walaalo ah iyo Musharax ayaa tareenka ka raacay Milwaukee ilaa La Crosse ka dibna waxay u raaceen doon ku raran St. Paul. Markii ay la kulmeen Bishop-ka, waxay ka tageen faras iyo gaari-qabe dhanka Mankato. Ka dib seddex maalmood ka dib wadooyin wasakh ah oo leh ruts badan, Walaalaha waxay yimaadeen Sebtember 3deeda magaalada Mankato si ay ugu farxaan kaniisadaha Katooliga ee maxalliga ah. Laga bilaabo Sts. Peter iyo Paul School ee 1865, Walaalaha ayaa sidoo kale wax ka baray iskuulada ku yaal St. John Baptist, St. Joseph, iyo kaniisadaha Holy Rosary.
Sanadkii 1912 ayaa Hooyo cusub laga furay Talada Wanaagsan ee Hill oo ay la socoto Akadeemiyada Talada Wanaagsan ee gabdhaha. Dhismo dugsi oo cusub ayaa la dhisay 1966. Tani waxaa la xiray 1980. Maanta Iskuulada Katooliga ee Loyola waxaa lagu xareynayaa dhismihii hore ee Akadamiyada, wax yar uun ka hooseeya Xarunta Waxbarashada.
Walaalaha ayaa sii wadaya maanta la kulanka baahiyaha aan buuxin, gaar ahaan carruurta, dhalinyarada, iyo haweenka.